နတ်​ပြည်​မှာ.တည်​ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလား… - Tameelay
နတ်​ပြည်​မှာ.တည်​ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလား…..အမြင့်​ကြီးပဲ..““တိမ်တောင် တိမ်တိုက်တွေကြားက မုလအိဘုရား မုလအိတောင်““
ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတခု….
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဒေသတွင်း အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီး (၆၅၇၈)ပေမြင့်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ သွားလာခက်ခဲပြီး ဘုရားဖူးအများစုကနွေဦးပေါက်စမှ သွားဖူးတာများပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မြ၀တီ- ဝေါလေ-စုကလိ လမ်းကနေ သွားလို့ ရသလို..
ကော့ကရိတ်-ကျိုက်ဒုံလမ်းကနေလည်း သွားလို့ ရပါတယ်။
သို့ မဟုတ်..ထိုင်းဘက်ခြမ်း နယ်စပ်ကနေလည်း သွားလို့ ရပါတယ်။
တောတောင်ထူထပြီး စေတီဘုရားတည်ရှိတဲ့နေရာဟာတောင်အလွန်မြင့်တော့ ဆောင်းရာသီ မြူနှင်းတွေဝေတဲ့အချိန်မိုးရာသီလို အချိန်တွေမှာ ဘုရားစေတီနီးနားတောတောင်တမြင်တခွင်မှာ တိမ်စိုင် တိမ်လိတ်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပါတယ်။
လေအေးတွေလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းတိုက်နေတော့ (တခါတလေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်နေ)ဘုရားဖူးသူအဖို့ အနွေးထည်တွေ လုံလုံလောက်လောက်ယူဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆောင်းညတွေဆို မြူနှင်းကျသံ “တဖျောက်ဖျောက်“ကလည်း မိုးကြီးရွာချသလို ထင်မှတ်မှားလောက်အောင်ပါဘဲ။
မုလအိစေတီဘုရာဟာ သမိုင်းရာဇ၀င်အရ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆံတော်ရှင် ဌာပနာထားတဲ့ ဘုရားတဆူလို့ ဆိုပါတယ်။
စေတီဘုရားနဲ့ ဝန်းကျင် တောတောင်ရေမြေတွေဟာ သန့် ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ နယ်မြေဖြစ်ပြီး ဘုရားဖူးသူများအနေဖြင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ သားငါးစားခြင်း(သက်သတ်လွတ်နယ်မြေ)၊ကြမ်းတမ်းစကားပြောဆိုခြင်း၊ သမီးရည်းစားမဖွယ်မရာ(လက်ကိုင်ခြင်းမှစ)လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးခြင်း၊ မဟုတ်မမှန်သောစကားပြောဆိုခြင်း များကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါတယ်။
ငှင်းရှောင်ကြဉ်ရသော အရာတခုခု ဖေါက်ပြန်ပါက အချိန်အခါမဟုတ် လေကြီးမိုးကြီးရွာသွန်းခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ တောကောင်များ(ကျားအပါအ၀င်)က လူသားများကို အန္တရာယ်ပြုခြင်းများနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီး ခရီးတထောက်မှာ ကိုယ်လက်သန့် စင်ခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်/ခေါင်းဆေးပြီးမှစေတီဘုရားကို တက်ဖူးရပါတယ်။
မုလအိတောင်ထိပ်မှာ သီလမစင်ကြယ်၊ သမာဓိအားမကောင်းတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေဆိုလျှင် သီတင်းသုံးမမြဲခြင်း၊ပြည်သူများအနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရောက်လာလျှင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာလေကြီးမိုးကြီး ၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အတိတ် နိမိတ်တွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
တောင်ထိပ်မှာ အမျိုးသမီးများ ဖူးမျှော်တဲ့ဘုရားနဲ့ ၊ အမျိုးသားများသာ ဖူးမျှေ်တဲ့ဘုရားရှိပါတယ်။
ကြည်ညိုသူများ သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်သလိုရေမြေ တောတောင် သဘာဝအလှတရားတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူအနေနဲ့ လည်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
လောဘ ဒေါသ အာဃာတစစ်ပွဲ၊ အမုန်းတရားတွေ၊ ပူပင်သောကတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ခဏတာမေ့ထား/ပစ်ထားပြီး……
သီလသမာဓိရှိရာ၊ သန့် ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိရာ၊လောဘ ဒေါသတွေကင်းဝေးရာ၊စိတ်နှလုံး အေးချမ်းရာ ၊ တောစောင့်နတ်ကောင်း၊တောင်စောင့်နတ်ကောင်း၊ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်၊ သူတော်စင်တို့ ရှိရာ ၊ အမှန်တရားရှိရာ၊ အရပ်တခုမှာခဏတာလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် သွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ ပုထုဇဉ်လူသားအားလုံးကို တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ပါ၏။
ငြိမ်းချမ်းမှုတခုခုကို သင် ရယူပိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ လည်း မျှေ်လင့်မိပါ၏။
၁၂ မတ်လ ၂၀၁၈
credit Dham Ma Piya
နတျ​ပြညျ​မှာ.တညျ​ထားတဲ့အတိုငျးပါပဲလား…..အမြငျ့​ကွီးပဲ..““တိမျတောငျ တိမ်တိုကျတွကွေားက မုလအိဘုရား မုလအိတောငျ““
ကရငျပြည်နယျရဲ့ အထင်ကရ နရောတခု….
ကရငျပြည်နယျ၊ ဒသေတွငျး အမြငျ့ဆုံးတောငျဖြဈပွီး (၆၅၇၈)ပမြေငျ့ပါတယျ။
မိုးရာသီမှာ သွားလာခက်ခဲပွီး ဘုရားဖူးအများစုကနွေဦးပေါက်စမှ သွားဖူးတာများပါတယျ။
ကရငျပြည်နယျမြဝတီ- ဝေါလေ-စုကလိ လမျးကနေ သွားလို့ ရသလို..
ကော့ကရိတျ-ကျိုက်ဒုံလမျးကနေလညျး သွားလို့ ရပါတယျ။
သို့ မဟုတျ..ထိုငျးဘကျခြမျး နယ်စပ်ကနေလညျး သွားလို့ ရပါတယျ။
တောတောင်ထူထပွီး စတေီဘုရားတညျရှိတဲ့နရောဟာတောငျအလွနျမြငျ့တော့ ဆောငျးရာသီ မြူနှငျးတွေဝေတဲ့အချိန်မိုးရာသီလို အချိနျတွမှော ဘုရားစတေီနီးနားတောတောင်တမြင်တခွင်မှာ တိမ်စိုငျ တိမ်လိတျတွနေဲ့ ဖုံးလှမျးနတေတ်ပါတယျ။
လေအေးတွလေညျး စဉ်ဆက်မပြတျအမွဲတမျးတိုကျနေတော့ (တခါတလေ ခပျကွမျးကွမျးတိုကျနေ)ဘုရားဖူးသူအဖို့ အနွေးထညျတွေ လုံလုံလောကျလောကျယူဆောငျွသားဖို့ လိုအပ်ပါတယျ။
ဆောငျးညတွေဆို မြူနှငျးကျသံ “တဖျောကျဖျောကျ“ကလညျး မိုးကွီးရွာချသလို ထင်မှတ်မှားလောကျအောင်ပါဘဲ။
မုလအိစတေီဘုရာဟာ သမိုငျးရာဇဝငျအရ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆံတျောရှငျ ဌာပနာထားတဲ့ ဘုရားတဆူလို့ ဆိုပါတယျ။
စတေီဘုရားနဲ့ ဝနျးကျငျ တောတောငျရေမြေတွေဟာ သနျ့ ရှငျးစငျကွယ်တဲ့ နယျမြေဖြဈပွီး ဘုရားဖူးသူများအနေဖြငျ့ အရကျသစောသောက်စားခြငျး၊ သားငါးစားခြငျး(သကျသတ်လွတ်နယျမြေ)၊ကွမျးတမျးစကားပြောဆိုခြငျး၊ သမီးရညျးစားမဖွယ်မရာ(လက်ကိုငျခြငျးမှစ)လုပျဆောငျခြငျး၊ခိုကျရနျဖြစ်ပွါးခြငျး၊ မဟုတ်မမှနျသောစကားပြောဆိုခြငျး များကို လုံးဝရှောငျကွ ဉျရပါတယျ။
ငှငျးရှောငျကွ ဉျရသော အရာတခုခု ဖေါကျပြန်ပါက အချိနျအခါမဟုတျ လကွေီးမိုးကွီးရွာသွနျးခြငျး၊မိုးကွိုးပဈခြငျး၊ တောကောင်များ(ကျားအပါအဝငျ)က လူသားများကို အန်တရာယျပြုခြငျးများနဲ့ ကွုံရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယျ။
တောင်ထိပ်ကိုတကျပွီး ခရီးတထောက်မှာ ကိုယ်လကျသနျ့ စငျခြငျး၊ ခေါငျးလျှျော/ခေါငျးဆေးပွီးမှစေတီဘုရားကို တက်ဖူးရပါတယျ။
မုလအိတောင်ထိပ်မှာ သီလမစငျကွယျ၊ သမာဓိအားမကောငျးတဲ့ ရဟနျးသံဃာတွဆေိုလျှငျ သီတငျးသုံးမမွဲခြငျး၊ပြညျသူများအနိုင်ကျငျ့စ်ကောားတဲ့နိုငျငံတျောအကွီးအကဲများရောက်လာလျှငျ ကွောက်မက်ဖွယျရာလကွေီးမိုးကွီး ၊မိုးကွိုးပဈခြငျး အတိတျ နိမိတျတွနေဲ့ ကွုံရတတ်ပါတယျ။
တောင်ထိပ်မှာ အမျိုးသမီးများ ဖူးမျှော်တဲ့ဘုရားနဲ့ ၊ အမျိုးသားများသာ ဖူးမှေ်ျတဲ့ဘုရားရှိပါတယျ။
ကွညျညိုသူများ သွားရောက်ဖူးမျှျောနိုငျသလိုရေမြေ တောတောငျ သဘာဝအလှတရားတွကေို ချဈမြတျနိုးသူအနေနဲ့ လညျး သွားရောက်လည်ပတျနိုင်ပါတယျ။
လောဘ ဒေါသ အာဃာတစစ်ပွဲ၊ အမုနျးတရားတွေ၊ ပူပငျသောကတွေနဲ့ ပြညျ့နကျနတေဲ့ ပတျဝနျးကျငျတွကေို ခဏတာမထေ့ား/ပစ်ထားပွီး……
သီလသမာဓိရှိရာ၊ သနျ့ ရှငျးစငျကွယ်မှုရှိရာ၊လောဘ ဒေါသတွေကငျးဝေးရာ၊စိတျနှလုံး အေးချမျးရာ ၊ တောစောငျ့နတျကောငျး၊တောငျစောငျ့နတျကောငျး၊ နတျကောငျးနတျမြတျ၊ သူတ်စောင်တို့ ရှိရာ ၊ အမှန်တရားရှိရာ၊ အရပ်တခုမှာခဏတာလေးဘြဲဖဈဖြဈ သွားရောက်လည်ပတျကွဖို့ ပုထုဇဉ်လူသားအားလုံးကို တိုက်တွနျး နိုးဆ်လောိုက်ပါ၏။
ငွိမျးချမျးမှုတခုခုကို သငျ ရယူပိုင်ဆိုင်လိမျ့မယ်လို့ လညျး မှေ်ျလငျ့မိပါ၏။
အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ အဘွားအို (စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေတဲ့)
အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ။ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ Crd:ဘကြီးစိုး အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ။ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ Crd:ဘကြီးစိုး အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ။ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ Crd:ဘကြီးစိုး အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ။ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ Crd:ဘကြီးစိုး အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း …
မှတ်သားသင့်သော အဖိုးတန်စကား(၁၄) ခု
မှတ်သားသင့်သော စကားများ ၁။မေတ္တာဆိုတာ အဟောင်း အသစ် အားလုံးကို မြတ်နိုးတာပါ ၂။အနိုင်အရှုံးဆိုတာ ပွဲအစမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး အဆုံးသက်ကို ကြည့်တာ ၃။ရတာကို မလိုချင်ရင် လိုချင်တာကို ရအောင်ကြိုးစားပါ ၄။အလှအပကြောင့် ဘဝပျတ်သလို မာနကြောင့်လည်း ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော် ၅။မိမိအကျိုးအတွက် သူတပါးအား အသုံးချ၍ရသော အောင်မြင်မှုသည် ရေရှည်တည်တံ့မည်မဟုတ် ၆။သစ်ပင်လို …
ခေတ်ပြောင်းလာပါပြီ။ ဆေးပညာတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ လူအသက်ရဲ့ သက်တမ်း ပိုမိုတိုးတိုးလာပါတယ်။ အသိုင်းအ၀န်းထဲမှာ အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေ ပိုပိုများပြားလာပါတယ်။ သားသမီး ၆ ယောက် ၇ ယောက် မွေးတဲ့ခေတ်ကြီးလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကလေး ၂ ယောက် ရှိတဲ့အိမ် များလာပါတယ်။ ၃ယောက် ၄ ယောက်ဆိုရင် …